Natiijada Codbixint Xoriyadoonka Catalna ee Dalka Spain – Balcad.com Teyteyleey
By Abdallah Hassan	 On Oct 2, 2017
kagadaal diyaargaroow xoogan codbixnta madaxabanaanida Maamulka Catalan oo dalka Spain ka trisan. kaa oo hadeer donaya xoriyad i uu ka qaato dhulweynaha dalka Spaian. dadka reer Catalan shacbi iyo siyaasiyiin waxaa xiisa iyo xamaasad u qabaan madaxbanaani iney ka qaataan dalka Spain
Madaxadka Gobolka Catala oo saxafada la hadashay ayaa sheegay in ay natiijo fiican ka soo baxaday doorashada 2,300 labad kun iyo sedex boqol goob codbixin ayaa ladiyaarshay in ay ka codeeyaan dad gaaraya 5.3 million Shanmilyan iyo Sedex bolokun qofood. Malinta axada codbinta wey dhacaday inkastoo ay jirtay dhibato iyo is hortaag xoogan ciidanka dowlada ay sameyen
Carles Puigdemont Madaxa Gobolka Catalan ayaa shegay in 319 goob cod bixin la xiray inka badan lagu sameye hadaad iyo hajuum aysan dadka sid saxad u codeeyn. waxaa suusrtagashay in dad 2.200 Labo milyan iyo laboqol kun qofood codkoda dhibtaan 90% ay ku codeeyeen Haa Gooni Ugoosad.
Xukumada Dalka Spain ayaa waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijda kasoo baxaday codbixinta. waxana ay sheegtay rabshado xoogan ay waxyeelo u geeysto in kabadan 12 askarta dowlada Spain waxaana xirmay oo qura 92 goob codbixin ah. Xukumada oo isqilafans ayaa siyabo kaladiw u hadashay . Mr. Ada Colau Duqa Magaalda Barcelona ay ku tilmaya sida ciidanka police u dhaqmeyn in ay tahay si xun. halka Soraya Saenz Resul Wasre uxigenka sheegay in dowlada talabo fiican qaday Boliskana si xirfadeyn waajibkas u gutay.
Dowlada Spain ay leh Sakay oo Isniin shir degdeg arinka Catalana oo anoqday midka mid xiisadii ugu xumeey ebed taarikh dalka Spain oo hadeer dhex maquuranyso dagaal ay la gashay dadka shacbiga aftida dhibanlah. sida ay sheegay xeeldheryaal arimaha siyasada odoros. dowlada waxaa u furn labo arin oo ah in ay aqbasho natijad codbixita oo xoriyad siiso Catalan iyo in ay cadaadis dhankast ku bilwada Siyasiyiint, Xisbiyada iyo Xildhibaanda kasoo sheedo Catanal
The post Natiijada Codbixint Xoriyadoonka Catalna ee Dalka Spain appeared first on Ilwareed Online.
Rabshado dhexmaraya ciidanka iyo dadka Camaruun